after mysql database migrated, user login keep failing — MYSTERY ZILLION
after mysql database migrated, user login keep failing
November 2013 in Database
MySQL database တခုကို ဆာဗာ အဟောင်းကနေ အသစ်ကိုရွေ.တာ အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်။
ဒါပေမယ့် User အကောင့်တွေအားလုံး Application ထဲကနေ Login Password နဲ.၀င်လိုက်ရင် မှားနေတယ်ဘဲ ပြနေပါတယ်။
အရင်အဟောင်းမှာတုန်းက User PW တွေက Encrypted လုပ်ထားတာပါ။
ကိုယ်တိုင် ရေးထားတဲ့ app လား ဒါမှမဟုတ် web app တစ်ခုခု လား ? encryption key မတူတော့တာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ database ထက် config က encryption key မတူတာကြောင့် ပြန်ပြီး ဖြည်မရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Open Source application တခုပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကို ပြန်ပြီး Customized လုပ်ထားတာ။
အရင် ဗားရှင်းအဟောင်းတုန်းက ရှေ.လူတွေရေးထားခဲ့တာ၊ ကိုယ့်လက်ထက်ရောက်တော့ အဲ့ဒါကို ဗားရှင်းအသစ်တင်ရမယ့် တာ၀န်ဖြစ်လာကော။
ဒါနဲ. Virtual Machine တခုလုပ်ပြီး ဒေတာဘေ့ ရွေှ.တာ။ အရင်ကီးတွေက ဘာမှန်းလဲ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်၊ အဲ့ဒီလူတွေလဲ ကုမဏီမှာမရှိတော့ဘူး။
MySQL ဆိုတော့ PHP ဖြစ်ဖို့များမယ်ထင်တယ် PHP Version ကို အရင်သုံးတာနဲ့ ဘာကွာလဲကြည့်ပါ Password တွေကို Hash လုပ်ထားတာမှာ crypt() ကိုသုံးထားတာရှိရင် အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး crypt() က Generate လုပ်ထားတဲ့ Hash က 5.3.7 ကနေစပြောင်းတယ် အောက်ကလင့်တွေမှာကြည့်ပါ။
စက်ပြောင်းရုံနဲ့ မရတာဆိုလို့ ထင်တာပြောတာနော် မဟုတ်ရင်တော့ ဘာသုံးထားတယ် version ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့်ရယ် ရေးထားတာနမူနာပြ အဲလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမှ အကြံပေးလို့ရမယ်ထင်တယ်။